बेल्जियमबाट फर्किएकी बाग्लुङकी अंशुको कोरोना अझै ठिक भएन, तेस्रो रिपोर्ट पनि ‘पोजेटिभ’ ! «
बेल्जियमबाट फर्किएकी बाग्लुङकी अंशुको कोरोना अझै ठिक भएन, तेस्रो रिपोर्ट पनि ‘पोजेटिभ’ !
Published : 14 April, 2020 8:00 pm
कोरोना संक्रमण देखिएपछि उपचारमा रहेकी बागलुङकी १९ वर्षीया अंशु सापकोटाको तेस्रो परीक्षणमा पनि कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ। गण्डकीको प्रयोगशाला र काठमाडौंबाट पनि पोजेटिभ देखिएको हो।‘सुरुमा हामीले पोखरामा टेष्ट गर्‍यौं। यहाँ पोजेटिभ देखियो।
त्यसपछि काठमाडौं पठाएर टेष्ट गर्दा उता पनि पोजेटिभ नै देखिएको छ,’ गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोदविन्दु शर्माले भने, ‘उहाँको लगातार तेस्रो पटक पोजेटिभ देखिएको हो।’ अंशु चैत १५ गतेदेखि बागलुङको धवलागिरी अञ्चल अस्पतालमा उपचाररत छिन। ४ चैतमा बेल्जियमबाट कतारको दोहा हुँदै नेपाल झरेर बागलुङ पुगेकी अंशुसँगै आएकी ६५ वर्षीया वृद्धाको पनि दोस्रो परीक्षणसमेत पोजेटिभ आएको छ।